"ANGARA" (बूस्टर): विनिर्देशों र रन
पछिल्लो दशक भन्दा ठाउँ मा उडान पछि पहिलो उपग्रहहरु को प्रक्षेपण तिनीहरूलाई हेर्दै पछि सडक मा औसत मानिस धेरै ध्यान छैन भनेर बारम्बार भएका छन्। धरती कक्षा मा निरन्तर फरक उद्देश्यका लागि उपकरणहरू सयौं घुमाउन। उपग्रहहरु संचार, निगरानी, नेविगेशन प्रदान, तिनीहरूले अनुसन्धान को लागि प्रयोग गरिन्छ, र सेल फोन, लेजर पाठकहरूलाई, वा पीसी, अघिल्लो पुस्ताका मात्र साहसी सपना सक्छ जो जस्तै आधुनिक जीवनको रूपमा परिचित trappings, हुन्छन्।
तर कृत्रिम ठाउँ वस्तुहरु इच्छित कक्षा प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ, र यो भन्दा साधारण यातायात सेवा अनुवाद autoenterprises, एयरलाइन्स, ढुवानी कम्पनीहरु रेल जाने जस्तै व्यापार थियो। रूस - नजिकै-धरती ठाउँ मा उपग्रहहरु को वितरण मा विश्व नेता। ठाउँ रकेट "ANGARA", जाहिर छ, चाँडै काम को लागि मुख्य उपकरण हुनेछ।
को अपकेंद्र शक्ति बारे
को सोभियत संघ पतन पछि, रूस कानुनी रूपमा यसको मुख्य cosmodrome को deprived छ, Baikonur क्षेत्र मा छ र एक कजाख भएको छ। यसलाई प्रयोग गर्न, को पाठ्यक्रम, सम्भव, तर लागि अब तिर्नुपर्छ, र एकदम केहि। पहिलो सोभियत को सुरु पैड किन कारण अन्तरिक्ष यान देश, सरल को दक्षिणी भाग मा निर्मित थिए। को cosmodrome को भूमध्यरेखा गर्न नजिक, को ठूलो अपकेंद्र शक्ति यसको अक्ष ग्रह परिक्रमा कारण। (: क्यापेक्यानाभेरल गिनी अन्य उदाहरणहरू) तदनुसार, यो कम इन्धन आवश्यकता सजिलो मिसाइल हटाउन गुरुत्वाकर्षण को शक्ति। विदेशी देशहरुमा मा रूस निर्भरता, पनि धेरै अनुकूल, खराब छ। Cosmodrome "Plesetsk" र "पूर्व" - यो नयाँ सुरुवात पैड जो देखि लन्च पूरा गर्न भविष्यमा अपेक्षा गरिएको छ। "ANGARA", एक नयाँ पुस्ता को वाहक रकेट, हुन शक्तिशाली पर्याप्त गर्न स्थानमा कक्षा व्यावसायिक माल मा अक्षांश उत्तरका Baikonur।
को विशेषज्ञहरु Khrunichev। एम वी Hrunicheva र तिनीहरूलाई सहयोग सीबी मा काम ( "ऊर्जा", ब्यूरो नाम वी पी Makeeva, "Energomash" र अरूलाई।) आफ्नो क्षमताहरु स्पेक्ट्रम पहिले प्रयोग वाहक फैले, एक जटिल बनाउन tasked गरिएको छ। यी युक्रेन "प्रोटोन" मा निर्मित समावेश, "Zenit-2" "चक्रवात" र। यी ठाउँ प्रविधि नमूनाहरू सबै रकेट "ANGARA" प्रतिस्थापन थियो। मिडिया को विभिन्न प्रकारका प्राविधिक विशेषताहरु कक्षा गर्न पेलोड को मोटाइ र वजन मा फरक। universality हासिल गर्न, नयाँ वैचारिक दृष्टिकोण आवश्यक।
पहिलो को उप महानिर्देशक एस पि सी तिनीहरूलाई। परियोजना डक्टरेट मा आफ्नो काम समयमा Khrunichev एए मेदभेदेभ। पछि, उनले डिजाइन टोली नेतृत्व।
को मड्यूलर डिजाइन
को मड्यूलर सिद्धान्त मा बनाइयो सुरुदेखि सोभियत मिडिया। को "वोस्तोक" इन्जिन मा hull मिसाइलहरु आसपास चार प्याकेजहरू मा राखिएको थियो। कार्य केवल एक धेरै शक्तिशाली सिस्टम डिजाइनर राज्य स्पेस Khrunichev अनुसन्धान र उत्पादन केन्द्र अघि कक्षा मा भारी कार्गो परिवहन सक्षम बनाउन थिएन। तिनीहरूले विभिन्न जनता संग नजिक-धरती ठाउँ वस्तुहरु को वितरण लागि विभिन्न क्षमता को वाहनहरु को एक परिवार डिजाइन थियो। त्यसैले "ANGARA" को एक श्रृंखला थियो।
बूस्टर यसको डिजाइन मा embodiments "हैंगर 1.1" र "1.2 Angar" मा एक सार्वभौमिक मोड्युल समावेश छ। तीन वा पाँच मन पछि कक्षाहरू "ANGARA-A3" र "ANGARA-A5" को लागि ठूलो क्षमता सिर्जना गर्छ। यो विचारधारा लचिलो दृष्टिकोण हुन र लागत अनावश्यक जोगिन गर्न स्वतन्त्रता छ प्रणाली लचीलापन दिन्छ र रूसी अन्तरिक्ष एजेन्सी को व्यावसायिक क्षमता बढ्छ।
बूस्टर पूर्ण रूस मा निर्माण र विशेष घरेलू एकाइहरु र सम्मेलन आउँछ - त्यहाँ अर्को रणनीतिक महत्त्वपूर्ण फरक र लाभ, द्वारा "ANGARA" विशेषता छ जो छ। हालका घटनाहरू रूसी संघ को कस्मिक र प्राविधिक सार्वभौमिकताको आर्थिक लाभकारी चित्रण।
मुख्य सूचकांक - वजन, जो कक्षा मा एक रकेट "ANGARA" राख्न सकिँदैन। प्राविधिक विशेषताहरु सार्वभौमिक मोड्युलको आफ्नो डिजाइन मा समावेश निर्भर। मा सबैभन्दा शक्तिशाली अप 35 टन 1,100 भन्दा बढी टन पेलोड को कुल वजन मा (संख्या पीए अनुसार, श्रृंखला एक-7) वाहक को संस्करण। यो उहाँले उठाउनु सक्छ "प्रोटोन-एम" को रूपमा, Baikonur देखि सुरु बारेमा धेरै रूपमा छ। बीचमा वर्गले एक-3 को एक संस्करण हो, यसलाई 14.6 टन, उहाँले 481 टन वजन गर्दा बोक्न सक्छ। अन्तमा, lightest रकेट - "ANGARA", विशेषताहरु जो अक्सर ठाउँ (3.8 टन) मा प्रदर्शन गर्न आवश्यक जो छैन धेरै भारी र भारी वस्तुहरु, अनुरूप।
कन्फिगरेसन को लचीलापन साथै त्यहाँ रूसी व्यावसायिक अन्तरिक्ष अन्वेषण को प्रतिस्पर्धा बढ्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कारक हो। को मड्यूलर डिजाइन सुरूवात साइटमा मिडिया को सजिलो र सस्ता वितरण बनाउँछ। रकेट पनि disassembled रेल ल्याउन सक्छ।
अत्यधिक विषाक्त Oxidants संयोजनमा भारी वाहनहरु लागि इन्धन रूपमा प्रयोग heptyl दुर्घटनामा वा अन्य आपतकालीन अवस्थामा को मामला मा क्षेत्र को पर्यावरण दूषण को खतरा सिर्जना गर्छ। वाहक हुन्छन् जो प्रत्येक सार्वभौमिक रकेट एकाइ, को आधार "Angar" आरडी-191 स्ट्रोक आरजी-1 मा सञ्चालन एउटा इन्जिन छ। को oxidizing एजेन्ट एकदम प्रणाली को सुरक्षा बढ्छ र वातावरण मा हानिकारक प्रभाव कम जो अक्सिजन, द्रवीभूत छ। Wherein प्रत्येक सार्वभौमिक मोड्युल 212,6 thrust उत्पन्न गरिन्छ।
वैचारिक डिजाइन यू। एन Koptevym, Rosaviakosmos को टाउको द्वारा अनुमोदित भएको थियो, र रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित, जसको निर्णयाधिकार मा समावेश गतिविधिहरु KB। को प्रोटोटाइप को एक परिणाम परीक्षण गरिएको छ रूपमा काम, दस वर्ष भयो। 2008 मा, केमिकल इन्जिनियरिङ (FSE "यस प्रकार देखि RCP") मा आगो परीक्षण एकीकृत मिसाइल मोड्युल। त्यसपछि, 2009 मा, तथाकथित "चिसो परीक्षण" चेक र पीठ हाइड्रोलिक प्रणाली, इन्धन घटक संग इन्धन एकाइहरु बित्यो। अन्तमा, सबै नोड्स URM "ANGARA" को एक व्यापक समीक्षा 2010 मा भयो। बूस्टर परिचालन घोषणा भएको थियो। परीक्षण सबै सार्वजनिक सम्मेलन र प्रणाली भइरहे। अब मञ्चमा उडान परीक्षण थिए।
सुरु गर्न पहिलो प्रयास
जो सही गणना हुन सक्छ, र कसरी सफल प्रक्षेपण सफलतापूर्वक जमीन र पीठ परीक्षण, कुनै पनि प्रदर्शन अन्तरिक्ष प्रविधिको मुख्य प्रमाण पारित हुनेछ छैन। यो जुन 27, 2014 को Plesetsk cosmodrome देखि "ANGARA" शुरू कि योजना थियो। बूस्टर को 5.7 हजार। किमी हटाउन र कामचट्का (को Kura परीक्षण साइट) को दिइएको क्षेत्र पर्नु एउटा बैलिस्टिक trajectory मा पेलोड सिमुलेट एक मोडेल साथ सँगै दोस्रो चरण जुटाउने कक्षा पुगन बिना थियो। त्यो दिन भयो कहिल्यै। बारेमा पन्ध्र मिनेट स्वचालित अनुगमन प्रणाली सुरु ईंन्धन प्रणाली को इनकार बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछ अघि लागि, स्पंज oxidant मा दबाव ड्रप व्यक्त गरे। Prelaunch काउन्टडाउन समय रोकिएको छ। सायद रूस को राष्ट्रपति र किनभने यो विफलता को दुखी, तर, स्पष्ट, स्मार्ट सिस्टम एक धेरै ठूलो विपत्ति रोकियो भनेर खुसी थियो।
इन्धन को रकेट प्रक्षेपण प्याड बाट बन्द गरे, लीक, र सबै प्रणाली विधानसभा र परीक्षण जटिल मा एक गहन जाँच गर्न subjected। यो अपेक्षा गरेको भन्दा बढी लिए, त्यसैले सुरु फेरि सारिएको थियो। अन्तमा, ठाउँ लिए, यो जुलाई9भयो। उडान सामान्य मोडमा निर्धारित थियो। को 4th मिनेट को 43 सेकेन्ड पछि सुरूवात टाढा भङ्ग र फसे पछि Pechora सागर पहिलो कदम। दोस्रो चरण2सेकेन्ड पछि फेरि इन्जिन सुरु भएको छ, 8 मिनेट उहाँले काम गरे। 11 सेकेन्ड। रिसेट fairing पहिलो चरणको अलग पछि 10 सेकेन्ड भयो। सामान्य मा, सबै कुरा दिइएको अनुक्रमरेखाचित्र लागि राम्रो भयो। कामचट्का गर्न सम्पूर्ण उडान 21 मिनेट लाग्यो।
मिति सुरु गर्न दुई थिए, र दुवै सफल थिए। अन दोस्रो समयमा जियोस्टेशनरी कक्षा त्यसपछि सागर मा बाढी विषय हो जो दुई-टन लेआउट, शुरू भएको थियो। दुवै अवस्थामा, एक परिमार्जन सजिलो, निकट-धरती ठाउँ मा वितरण को लागि आवश्यकता 35 टन यद्यपि, हुनत रकेट "ANGARA" निर्दिष्टीकरण एक-7 अनुमति प्रयोग भएको थियो।
यो विश्वव्यापी आर्थिक संकट विजयी पछि, ठाउँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, विकास को एक नयाँ चरण पुग्नेछ हुनेछ नयाँ ISS, वा interplanetary उडान को एक विचार सम्भव छ। उत्तरार्द्ध मामला मा, सबै भन्दा शक्तिशाली मिडिया सम्मेलन लागि भागहरु मा कक्षा मा एक विशाल spaceship हुनेछ जो परिवहन, हुनेछ।
त्यतिन्जेल, काम प्रमाणीकरण manned शुरूआत लागि "शेड" मा भइ रहेको छ।
Gorkinskoye चिहान: विवरण, सेवा, स्थान नक्सा
आवासीय जटिल "एवेन्यू 77"
सजायको प्रकारका। आफ्नो बब कसरी शैली
के उमेर मा एक बालकको पोर्क गर्न सकिन्छ? के तपाईं बच्चा पोर्क बाहिर गर्न सक्छन्
Hemorrhoid: अस्पताल र घरमा उपचार
वसन्त बारेमा एउटा रोचक तथ्य - बच्चाहरु भन्छन्
जवान एउटा उपहार
के अभ्यास गर्ने बालिका खुट्टा बीच अंतराल बनाउन मदत गर्नेछ?
कम्प्युटर मा नरमाइलो भने के गर्न? तपाईंलाई मदत गर्न इन्टरनेट!
व्हिस्की "Glenfiddik" - को कुलीन रक्सी को एक उज्ज्वल प्रतिनिधि
(अनुगमन र कारबाही प्रणाली) अनुगमन वातावरण को पारिस्थितिकी राज्य लागि